विचार/ब्लग | eawadhpost.com
April 9, 2019	Leaveacomment 481 Views
प्रभात देवकोटा २०६२/०६३ को जनआन्दोलनमा राजाहरुका शालिक र स्तम्भहरु आन्दोलनकर्मीको निशानामा परे । जसबाट नेपालगन्जको त्रिभुवन चोक पनि अछुतो रहेन । ०६२/०६३ को जनआन्दोलनमा आन्दोलनकारीले नेपालगन्ज सदरलाईनमा रहेको त्रिभुवनको शालिक तोडफोड गरे । तोडफोडबाट कुरुप बनेको त्रिभुवनको शालिक पछि प्रशासनले हटायो । र, बच्यो ठूटो स्तम्भ मात्रै । लगत्तै मधेश आन्दोलन सुरु भयो नेपालगन्जबाट । मधेश आन्दोलनका क्रममा प्रहरीको गोली लागेर कमल गिरी मारिए । कमल मारिएपछि मधेशकेन्द्रित दलहरुले आन्दोलनकै क्रममा त्रिुभवन चोकलाई कमल मधेशी चोक नामाकरण गरे । स्तम्भमा कमल मधेशी चोक पनि लेखियो । मधेश आन्दोलनको राप–ताप रहँदासम्म कतिपयले त्रिभुवन चोकलाई कमल मधेशी चोककारुपमा स्थापित गर्ने प्रयत्न गरे ...
March 19, 2019	Leaveacomment 514 Views
कहाँबाट लेख्न सुरु गरौं, कसरी सुरु गरौं ! लामो समयसम्म मैले निर्णय लिन सकेको छैन । तर पनि लेख्नु त छ नै । किन कि विषय र त्यसको व्यापकता हाम्रो सिंगो समाजसँग जोडिएको जो छ । सोमबार बिहानै एउटा समाचार पढेपछि अनेकन कुराहरु खेल्दै हल्लिएको मेरो मथिङ्गल लेखनीबाटै भएपनि केही हदसम्म शान्त त पार्नै प¥यो । चाहे अरुको मथिङ्गल किन नहल्लियोस् । साँच्चिकै निक्कै असहज हुँदो रहेछ, आफैले अपनाएको पेशाको बदनामीबारे चित्रण गर्न । गलत विषय र प्रवृत्तिलाई जिम्मेवार व्यक्तिले बाहिर ल्याउनुको साटो उल्टो नजरअन्दाज र संरक्षण गर्दा त्यसले भविष्यमा झनै ठूला दुष्परिणामहरु निम्त्याउने निश्चित रहन्छ । जिम्मेवार भनिएका व्यक्ति ...
June 26, 2017	Leaveacomment 780 Views
नेपालगन्ज नगरको विकासमा विजय कुमार गुप्ताको ठूलो योगदान छ । २०४९ सालमा नेपालगन्जको मेयर बनेका गुप्ताले आफ्नो कार्यकालमा नगरको कायापलट गर्ने थुप्रै योजनाहरु अघि सारेका थिए । कतिपय योजनाहरु कार्यान्वयन भए भने कतिपय योजनाहरु अँझै अघि बढ्न सकेका छैनन् । विकासको मामिलामा दृरदृष्टि भएका नेताका रुपमा चिनिने गुप्ताले अहिले राष्ट्रिय जनता पार्टीको केन्द्रीय उपाध्यक्ष छन् । उनको दल अहिले स्थानीय तहको चुनावमा सहभागि छैन । तर उनले स्थानीय तहको चुनावलाई भने नजिकबाट नियालिरहेका छन् । पूर्व मेयर गुप्ताले आसन्न स्थानीय तहको चुनाव अनि नेपालगन्जका मेयरका प्रत्यासीहरु र उनीहरुका प्रतिबद्धतालाई कसरी हेरेका छन् त ? पूर्व मेयर गुप्तासँग स्थानीय तह चुनावको ...
June 25, 2017	Leaveacomment 725 Views
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको लागि मेयर पदमा बलियो प्रतिस्पर्धी भएर संघीय समाजवादी फोरम नेपालको तर्फबाट चुनावी मैदानमा होमिएका कमरुदीन राईनले नेपालगन्जको स्थानीय समस्याको उठान गर्दै त्यसको ठोस समाधानसहित चुनावी एजेन्डा बनाएका छन् । प्रस्तुत छ, मेयर पदका उम्मेदबार राईनसँग गरिएको कुराकारीको सम्पादित अंश । नेपालगन्ज उपहानगरका समस्या यहाँको मुख्य रुपमा फोहर, ढल, सडक, खानेपानी, अव्यवस्थित बसोबास, शिक्षा, स्वास्थ्य, जनताको दिनचर्याका र किसानको समस्या हो भने राजनीतिक रुपले विगत लामो समयदेखि कांगे्रस, एमाले, माओवादीले यो नगरलाई भ्रष्टाचारको अखडा बनाएका छन् । फोहरको दीर्घकालीन समाधानलाई पहिचान गरी त्यसको प्रकार छुट्याउने र त्यस अनुसारको व्यवस्थापन गर्ने हो । फोहोरलाई पनि व्यवस्थापन गर्ने हो भने नगरको ...
April 22, 2017	Leaveacomment 7,299 Views
विनोद अग्रहरी सबैभन्दा कम खर्चमा सिड्नी पुगेको नेपाली म नै हुँला । साथी प्रमोदले पठाएको Buisness College को I-20 मद्दत र आफै Visa Apply गरेर म २ हजार डलर तिरेर ५ सय डलर साथमा बोकेर सिड्नी पुगें । दुई जना साथी मलाई लिन एयरपोर्ट आएका थिए । उनीहरुसँगै म उनीहरुको अपार्टमेन्ट Strathfield पुगें । ट्याक्सीको भाडा ३५ डलर पनि साथीहरुले नै दिए । ३५ डलरलाई नेपाली रुपैयाँमा Convert गरेर सोच्दा म दङ्ग परें । भोलिपल्ट साथीहरुले बैंक लगेर Account खोलिदिए र ट्रेनको टिकट कसरी काट्ने भन्ने सामान्य कुराहरु सिकाईदिए । ‘हामी अस्ट्रेलिया आउँदा यति नै साथीहरुले सिकाएका हुन् मैले पनि त्यही ...
प्रमुख पदमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता कसरी ?
April 7, 2017	Leaveacomment 1,468 Views
यति बेला देशै भर स्थानीय निर्वाचनको चहलपहल बढेको छ । शहर, बजार, गाउं घर चौक र चौरहामा जताततै निर्वाचनको बारेमा बहस गर्दैछन् । त्यति मात्र होइन अबको स्थानीय निर्वाचनमा दलहरुले आ–आफ्ना पार्टीलाई चुनाव जिताउन कडा कसरतमा लाग्दैछन् । दलका सक्रिय नेताहरु आफू कुन–कुन पदमा उम्मेदवार दिने भनेर होडबाजी चलेको अवस्था छ । पुरुष नेताहरु मात्र नभई महिला नेतृहरु पनि स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिन सक्रिय देखिएका छन् । स्थानीय चुनावले यति बेला हरेक जनताको मनमष्तिस्क र ढुकढुकीलाई चलायमान गरेको छ । स्थानीय निर्वाचनको माहौल दिन दिनै तातिदैछ । जसलाई प्रत्यक्ष अवलोकन गर्दा नेपाली जनता निर्वाचन चाहन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्न सक्छौं ...
March 8, 2017	Leaveacomment 891 Views
बेलैमा ध्यान दिऔं
February 7, 2017	Leaveacomment 608 Views
गर्मी याम शुरु हुँदैछ । बाँकेमा आगलागीको पनि उत्तिकै डर छ । विगत बर्षलाई हेर्दा यस क्षेत्रमै सबैभन्दा बढी आगलागी बाँकेमै भएको थियो । यसबाट ठूलो नोकसानी पनि नभएको होईन् । आगो लागे लत्तकै यसको नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र बाँकेमा कमी भएकै कारण नोक्सानी बढेको देखिन्छ । त्यसैले यस पटकको गर्मी शुरुवातसँगै अआगजनी नियन्त्रणका लागि बेलै सोच्न जरुरी देखिएको छ । यस क्षेत्रकै व्यापारिक केन्द्र बाँकेमा रहेका दमकलहरु जीर्ण भएका छन् । बर्षौ पुराना दमकलहरु जीर्ण बन्दै गएपनि तिनको मर्मत सम्भारका लागि सम्बन्धित निकायले कुनै चासो देखाएको पाइँदैन । यस बर्षपनि गर्मीयाम शुरु हुन लाग्दा समेत जीर्ण दमकलको मर्मत सम्भार गर्ने ...
निजामती सेवाप्रति किन खस्किँदै छ जनविश्वास ?
January 18, 2017	Leaveacomment 584 Views
बाबुराम पौडेल निजामती सेवा सरकारलाई जनता समक्ष र्पुयाउने माध्यम हो । जनस्तरमा काम गर्ने भएकोले यसलाई स्थायी सरकार तथा स्थायी कार्यकारिणी पनि भनिन्छ । प्रचलित कानूनको पालना गर्दै सरकारका नीति तथा कार्यक्रमलाई जनस्तरमा कार्यान्वयन गर्ने निजामती सेवाको काममै सरकारको प्रभावकारिता निर्भर हुन्छ । त्यसैले भन्ने गरिन्छ, कुनै पनि देशको निजामती सेवाभन्दा त्यहाँको सरकार राम्रो हुनै सक्दैन । पछिल्लो समय भने निजामती सेवा यसका विद्यमान आदर्श, मूल्य मान्यता, आचरण, जिम्मेवारी र जवाफदेहिताबाट विचलित हुँदा यसप्रतिको जनविश्वास घट्दै गएको छ । बदलिँदो विश्व परिवेश, नयाँ प्रविधि र जनअपेक्षा बमोजिम निजामती सेवाले आफूलाई ढाल्न नसक्दा जनविश्वास गुमाउँदै गएको हो । बढ्दो भ्रष्टाचार, राजनीतिकरण, ...
November 28, 2016	Leaveacomment 702 Views
नेपाल–भारत संबन्धलाई अखण्ड राख्नु पर्ने धारणा राख्दै भारतीय योग गुरु बाबा रामदेवले नेपालमा भइरहेको हिमाल, पहाड र तराई–मधेशको राजनीतिक विवादलाई जति सक्दो चाँडो टुङ्ग्याएर आर्थिक समृद्धतर्फ अघि बढनुपर्ने भन्दै आफुले योगमार्फत दुइ देशलाई फेरी जोडेर फर्किने बताउनु आाफैमा दुई देशबीचको विग्रेको संबन्ध सुधारको प्रयासका रुपमा ‘बाबा डिप्लोमेसी’ भन्न सकिन्छ । पश्चिमा मुलुकमा गल्फ डिप्लोमेसी, भारत–पाकिस्तानबीच क्रिकेट डिप्लोमेसी प्रयोग हुने पुरानो परम्परा अन्तरगत चलिआएको विषय हो । वि.सं. २००७ साल यता अहिले सम्मकै नेपाल–भारत संबन्ध कमजोर अवस्थामा पुगेकाले भारत खासगरी दक्षिण एशियामा आफ्नो प्रभाव खस्केको महसुश गर्दै नेपालमा संविधान जारी हुँदा विदेश सचिव एस.जय शंकरको भ्रमण हुँदै नाकाबन्दी देखि विग्रेको संबन्ध ...